Ikhaya » izithuba » Iindaba zoKhenketho » Ilizwe apho iAmerican Travel ihamba ngamanani erekhodi kwaye akukho mibuzo ibuziweyo
Iindaba zeenqwelo moya • Iindaba zesikhululo senqwelomoya • Iindaba zeAnga • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Imicimbi kaRhulumente • Iindaba Zokuhamba eHawaii • omnye • Abantu benza iindaba • Iindaba zoKhenketho • Iindlela zokuHamba | Iingcebiso Zohambo • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zokuHamba • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziShukumayo • Iindaba ze-USA
Ilizwe apho iAmerican Travel ihamba ngamanani erekhodi kwaye akukho mibuzo ibuziweyo
Ukhenketho lwaseTurkey luhamba ngamaxesha anzima
Ukuhamba ngenqwelomoya ukusuka e-US okanye eRashiya ukuya eTurkey akukho ngxaki. Iinqwelomoya ezininzi zaseTurkey ezihamba ngenqwelomoya ukusuka emasangweni aseMelika zishiya imithwalo elungileyo. Kungenxa yokuba bobabini abantu baseMelika kunye nabasemagunyeni baseTurkey abanandaba.
Ukufumana amazinyo okanye ukufakelwa kweenwele sisizathu esisemthethweni kubakhenkethi abaninzi baseMelika nabaseRussia, ezi nkonzo ziyafumaneka ngexabiso lesivumelwano eTurkey.
Intatheli ye-eTN isandula ukubhabha isuka e-US isiya eTurkey yahlala iiveki ezi-2 ibuyile kwaye khange ibuzwe malunga nobushushu bayo kunye nendlela evakalelwa ngayo.
I-United Airlines yambuza e-Honolulu xa wayebalekela eChicago malunga ne-COVID. Ngenye imini eChicago kwakungasekho mibuzo.
Ekubuyeni kwakhe ngenqwelomoya, wajonga iibhegi zakhe eIstanbul yonke indlela eya eLos Angeles xa wayebaleka kwiinqwelomoya zaseTurkey eziya eMunich naseUnited Airlines eSan Francisco naseLos Angeles. Akukho namnye owakhe wambuza ukuba uziva njani. Abasemagunyeni baseJamani abakhange bamvumele ukuba angene kweli lizwe ukusukela oko wabhabha esuka kwilizwe elinomngcipheko omkhulu (Turkey) waya kwilizwe elinomngcipheko omkhulu (i-USA)
Wakhwela i-United Airlines eMunich ngaphandle kwemibuzo kwaye wangena kwimfuduko kunye namasiko kwimizuzu emi-2. Akukho vavanyo lwe-COVID luyimfuneko,
Ingachaza ukuba kutheni iindwendwe ezihamba phambili eTurkey zivela eMelika naseRussia ngeli xesha.
Istanbul ihlala isisixeko esixakekileyo. Iibhari ngoku ziyavalwa ngeempelaveki, kodwa kuhlala kukho izinto ezininzi ezizodwa, kwaye uninzi lwamapolisa lunamehlo amaninzi angaboniyo ngesizathu.
Ukhenketho eTurkey luqhubela phambili kwaye iindwendwe ziyakuthanda ukuya kwilizwe elingenazithintelo. Ungakhathazeki ngokunxiba iimaski kwiibhasi zokujonga indawo.
Ukuphela kwamehlo kuxa uhamba ngenqwelomoya yokugqibela eLos Angeles ukuya eHonoluluy. Uvavanyo lwe-COVID-19 luyafuneka kwaye alunakuba kudala kuneentsuku ezi-3. Nangona kunjalo iimvavanyo ezinjalo akunakwenzeka ukuba zifumaneke. Intatheli yethu ikwazile ukufumana uvavanyo lokuya kwikhemesti ngaphandle kokuqeshwa, kodwa iziphumo zithathe iveki enye ukubuyela. Wacelwa e-Honolulu ukuba agcine ukuvalelwa yedwa iintsuku ezili-14.
Ngoku iTurkey itshintshe indlela ebika ngayo usulelo lwe-COVID-19 mihla le, yaqinisekisa ukuba ngawaphi amaqela ezonyango kunye namaqela aphikisayo ekudala ekrokrela-ukuba ilizwe lijamelene nokunyuka kwamatyala amatyhafisayo ayidinisa ngokukhawuleza inkqubo yezempilo yaseTurkey.
Ngobuso malunga nobuso, urhulumente kaMongameli u-Recep Tayyip Erdogan kule veki uphinde waqalisa ukunika ingxelo ngazo zonke iimvavanyo ezintle ze-coronavirus-hayi nje inani lezigulana ezinyangelwa iimpawu-ezityhala inani lamatyala emihla ngemihla ngaphezulu kwama-30,000. Ngedatha entsha, ilizwe liye laxhuma ekubeni lelinye lawona mazwe angachaphazeleki kangako eYurophu laya kwelinye lawona mabi.
Oko akuzange kumangalise kuMbutho Wezonyango waseTurkey, obelumkisile kangangeenyanga ukuba amanani angaphambili karhulumente ebefihla ubunyani bokusasazeka kwaye ukungabikho kokungafihli nto kunegalelo kulonyuko. Iqela ligcina, nangona kunjalo, ukuba amanani obulungiseleli asephantsi xa kuthelekiswa noqikelelo lwayo lwe-50,000 yosulelo olutsha ngosuku.
Akukho lizwe linokunika ingxelo ngamanani ngqo ekusasazekeni kwesi sifo kuba iimeko ezininzi azibonakali, kodwa indlela yangaphambili yokubala yenza iTurkey ijongeke kakuhle xa ithelekiswa namazwe, ngamatyala amatsha mihla le angaphantsi kwalawo achazwe kumazwe aseYurophu kubandakanya i-Italiya, IBritani neFrance.
Oko kutshintshe uLwesithathu njengoko iTurkey yemihla ngemihla iphantse iphindaphindwe kane ukusuka kwi-7,400 ukuya kwi-28,300.
Izibhedlele zelizwe zigqithisile, abasebenzi bezonyango batshisiwe kwaye abathengisi bekhontrakthi, ababekade benikwa izitshixo zokugcina uqhambuko luphantsi kovavanyo, bayasokola ukulandela usulelo, uSebnem Korur Fincanci, okhokela umbutho, uxelele I-Associated Press.
Nangona umphathiswa wezempilo ebeka izinga lokuhlala kwe-ICU kwi-70%, Umntu ophetheyo kwi-Istanbul-based Intensive Care Nurses 'Association, uthi iibhedi zonyango olunzulu kwizibhedlele zase-Istanbul ziphantse zizele, oogqirha bexakeka ukufumana indawo abaguli abagula kakhulu.
Banqongophele abongikazi kwaye abasebenzi abongikazi sele bediniwe.
Ukusweleka ngokusesikweni kwe-COVID-19 yemihla ngemihla kukonyuke ngokuthe ngcembe ukurekhoda amanani, kwafikelela kwi-13,373 ngoMgqibelo kusweleka abantu abatsha abali-182, ekubuyiselweni kwethamsanqa lelizwe ebelinconyelwe ukulawula ukubulawa kwabantu. Kodwa loo manani arekhodi ahlala ephikisana nawo.
USodolophu wase-Istanbul u-Ekrem Imamoglu uthe abantu abayi-186 babhubhe ngenxa yezifo ezosulelayo esixekweni ngo-Novemba ngo-22- usuku apho urhulumente wabhengeza ukubhubha kwe-139 COVID-19 kwilizwe liphela. Usodolophu ukwathe malunga nemingcwabo engama-450 yenzeka mihla le kwisixeko esikwi-15 yezigidi xa kuthelekiswa ne-avareji ye-180-200 ebhalwe ngo-Novemba kunyaka ophelileyo.
U-Koca uthe inani lezigulana ezinobungozi kakhulu kunye nokufa liyenyuka kwaye wathi ezinye iidolophu kubandakanya i-Istanbul kunye ne-Izmir bafumana "incopho yesithathu." I-Turkey iyakulinda, nangona kunjalo, iiveki ezimbini ukubona iziphumo zexesha lokuphuma kunye nezinye izithintelo ngaphambi kokuthathela ingqalelo ukungqongqo, utshilo.
Okwangoku, ilizwe lifikelele kwisivumelwano sokufumana iidosi ezizizigidi ezingama-50 zokuthintela eziveliswe yinkampani yezamayeza yaseTshayina i-SinoVac kwaye inethemba lokuqalisa ukuyinika abasebenzi bezonyango kunye nabagulel 'ukufa kwinyanga ezayo. Kukwintetho zokuthenga isitofu sokugonya esenziwe yiPfizer ngentsebenziswano nenkampani eyenza amayeza i-BioNTech. Isitofu sokugonya esenziwe eTurkey sicwangciselwe ukuba silungele ukusetyenziswa ngo-Epreli.